धनी मुख्यमन्त्री गुरुङ, सुनमात्रै ५१ तोला अरु सम्पत्ति कति ? - Sidha News
धनी मुख्यमन्त्री गुरुङ, सुनमात्रै ५१ तोला अरु सम्पत्ति कति ?
पोखरा। गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पति विवरण सार्वजनिक भएको छ । यसअघि उनीहरूले सम्पत्ति विवरण संसद र मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पटकपटक बुझाएको भने पनि सार्वजनिक भएको थिएन ।
मन्त्रिपरिषद प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतका अनुसार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सम्पत्ति उनको आफ्नै व्यक्तिगत नामको खातामा १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ । एभरेस्ट बैंकको पोखरा शाखामा उक्त रकम छ । प्रदेश सरकार प्रमुखका हैसियतमा गुरुङले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक लगायत सुविधा उक्त बैंकको खातामा जम्मा हुँदै आएको छ । सिभिल बैंकमा उनकै नाममा १ लाख रुपैयाँ नगद छ । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ।
मुख्यमन्त्रीका पाइलट छोरा विज्ञान गुरुङसमेतको नामको सम्पत्ति पनि मुख्यमन्त्री गुरुङको विवरणमा उल्लेख छ । विज्ञानको नाममा नबिल बैंकमा ६० र लक्ष्मी बैंकमा १० लाख रुपैयाँ नगद जम्मा छ । उक्त नगद विज्ञानले तलब भत्ताबाट आर्जेको सम्पत्ति भएको विवरणमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्रीको सम्पति विवरणमा सुन ५१ तोला, र चाँदी ९० तोला रहेको समेत उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्रीकी श्रीमती कुमारीमुनि गुरुङको नाममा जनकल्याण सहकारीमा ५ लाख, सिभिल बैंकमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा २ लाख रुपैयाँ रहेको विवरण मन्त्री बस्नेतले सुनाए । मुख्यमन्त्रीकी श्रीमती कुमारीमुनि निवृत्तिभरणसमेत प्राप्त गर्ने पूर्व्शिक्षक र लमजुङको क्वोलासोथर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षसमेत हुन् ।
९ भेडा र ७ वटा बाख्रालाई पनि समेटिएको सम्पत्ति विवरणमा मुख्यमन्त्रीको नाममा लमजुङको साविक गिलुङ गाविसको वडा नम्बर ९ मा १० रोपनी जमिन छ । उक्त जमिन अंशबन्डामार्फत प्राप्त भएको जानकारी मन्त्री बस्नेतले दिए ।
मुख्यमन्त्रीकी बहिनी आशकुमारी गुरुङको नाममा क्व्होलासोथर गाउँपालिकामा २७ रोपनी जमिन र एउटा घर छ । बहिनीले उक्त सम्पति अंशबन्डामार्फत पाएकी हुन् । अर्थमन्त्री किरण गुरुङको नाममा पोखरा १२ कुँडहरमा २२५ वर्ग्मिटर जमिन छ।
तनहुँ भीमाद नगरपालिका ९ का स्थायी बासिन्दा अर्थमन्त्री गुरुङले उक्त जमिन सापटी गरी किनेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ । उनकी श्रीमती कृष्ण श्रेष्ठले पर्वतको फलेबास नगरपालिका ६ मा ६ आना घडेरी पैतृक सम्पति माइतीबाट प्राप्त गरेकी छन् । ललितपुरको धापाखेलमा ६ आना घडेरी पनि उनीहरूले सापटी गरी खरिद गरेको जानकारी मन्त्री बस्नेतले दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री गुरुङकी आमाको नाममा भीमाद नगरपालिकामा ११ रोपनी ५ आना जमिन छ । उनका संगोलमा ४ दाजुभाइ र १ बहिनी छन् । स्वर्गे भइसकेका पिता तुलारामको नाममा ९० रोपनी जमिन भीमाद नगरपालिका (साविक भानुमती गाविस)मा रहेको पनि अर्थमन्त्रीको सम्पति विवरणमा छ । उनीसँग ४ तोला र श्रीमती कृष्णकुमारी श्रेष्ठसँग १५ तोला सुन छ । नबिल र एभरेस्ट बैंकमा रहेको नगदबारे भने सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छैन ।
गाउँमा कोरोना नभित्रियोस् भनेर हिमाल पारिको गाउँ लिमीवासीले चाले यस्तो कदम
गन्ध वा स्वाद थाहा नपाउनु को’रोनाको लक्षण !
कोरोना संक्रमण : अमेरिकाले उछिन्यो सबैलाई, साढे ८ लाख संक्रमित, ४२ हजारको मृत्यु, कुन देशमा कति?
यो मुलुक, जसलाई कोरोनाको कुनै मतलब छैन
चीनमा फेरि कोरोना संक्रमण बल्झियो
अब उपत्यका बाहिर यी शहरमा पनि कोरोना परीक्षण हुने